Mini Racing Adventures Android အတွက်ဒေါင်းလုပ်ပြုလုပ်ပါ
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Mini ကိုပြိုင်ပွဲ Adventures ကို
Mini ကိုပြိုင်ပွဲ Adventures ကို APK ကို
Mini ကိုပြိုင်ပွဲ Adventures ကိုမိတ်ဆက်ခြင်း, ဖြစ်နိုင်သည်လက်ရှိအချိန် multiplayer ကို download လုပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအခမဲ့, 3D အဆုံးမဲ့ဘက်အစဉ်အဆက်ဖန်တီးရူပဗေဒအခြေစိုက်ပြိုင်ကားစွန့်စားမှုဂိမ်း scrolling!
တွေ့ဆုံမာတင် Nitro Minimo, သို့မဟုတ်အတိုကောက် MnM ။ အခုတော့ကြီးတွေအိပ်မက်နဲ့အကြီးအကြီးတွေနှလုံးဖြည့်ဆည်းဖို့သူဖြစ်နိုင်သည်အရပ်ထဲမှာသို့သော်မျက်နှာစာအောက်မှာအတိုတည်ရှိသည်။ မိမိအရှာပုံတော်သူ့ရဲ့အချိန်အကြီးမြတ်ဆုံးခံနိုင်ရည်ပြိုင်ကားသမားအဖြစ်စံချိန်တင်ကိုင်ဆောင်သူဖြစ်လာစေရန်နှင့်မဆုတ်မနစ်လိုက်စားသောကသူ၏နေရာ၌ပြိုင်ဘက် Omini Speedario ကျော်လွှားရန်အတွက်မာတင်ကိုကူညီပါ။
Mini ကိုပြိုင်ပွဲ Adventures ကို 26 စွန့်စားအဆင့်ဆင့်၏အဝေးဆုံးနေရာကဖြတ်ပြီးခရီးသွားလာရန်, မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ခံစားအတူ 12 ထူးခြားတဲ့ယာဉ်များကျွန်တော်တို့ရဲ့စုဆောင်းမှုတစ်ခုချင်းစီကိုသော့ဖွင့်ရန်သင့်အားစိန်ခေါ်။ အရေးယူသို့အပြေးပြိုင်ပွဲကိုသင်အမြင့်မားဆုံးတောင်ကုန်း, ဖုန်သီချင်းများ, နှင်းဖုံးတောင်များနှင့်အခြားလှလှပပဒီဇိုင်းအဆင့်ကိုတက်ရန်သင့်အကြိုက်ဆုံးယုန်ကလေးကားများ, ATV, စမ်းသပ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်ပင် Truck ကားကို select အဖြစ်။5ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်မြှင့်တင်သော့ဖွင့်ခြင်းဖြင့်အလားအလာရှိသောသင်၏အမော်တော်ယာဉ်များအမြင့်ဆုံး။ ကျွန်တော်တို့ဟာ finish ကိုလိုင်းမှာသင်မြင်နိုင်ဆန္ဒရှိပေမယ့်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖန်တီးရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်ဒါကြောင့်လမ်းကိုရပ်လိုက်ဘူး။ သင်စိန်ခေါ်မှုတက်သည်မှန်သလော
Google ကသိမ်းဆည်းအားကစားပြိုင်ပွဲတိမ်တိုက်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်★
★ခေါင်းဆောင်အဖွဲ့များ & အောင်မြင်မှုများ
★ချောမွေ့နှင့်လက်တွေ့ကျကျရူပဗေဒ (အရေးယူဆောင်ရွက်မှုရှိသူတို့ရပ်ဆိုင်းမှုကိုကြည့်!) ။
★ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် 3D ပုံရိပ်ယောင်များနှင့်ဂရပ်ဖစ်
selection မော်တော်ယာဉ်များ (စသည်တို့ကို Offroad ယုန်ကလေး, ဘာဟာဘာဂ်, Moto ဆိုင်ကယ်, Truck ကား,) ၏★အများကြီး
★ upgrade မော်တော်ယာဉ်အစိတ်အပိုင်းများ
ဒီဂိမ်းကိုမဆိုမြန်နှုန်းမထင်မှတ်သော, လမ်းတောင်တက်သမားချွတ်ရော့ခ်တွားနှင့်အော်တိုဝါသနာအိုးများနှင့်ပင်ကတ္တရာဆွဲပြိုင်ကားသမားတစ်စိန်ခေါ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ယာဉ်အသွားအလာအလင်းအိမ်, သင့်ခါးပတ်မှာအစာရှောငျ, သင့်မောင်းနှင်မှုစတိုင်ကိုက်ညီကြောင်းကိုသင်၏ကိုယ်ပိုင်အကြိုက်ဆုံးကားများကောက်, အမြန်နှုန်းတက်နဲ့ Martin သူတို့အားပြင်းထန်သောလူမျိုးအနိုင်ရကူညီမရှိပါ!
လိုပဲနှင့်နောက်ဆုံးပေါ်သတင်းရရှိရန်နှင့် update လုပ်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook ကို & Twitter ကိုလိုက်နာပါ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်ကို Mini ကိုပြိုင်ပွဲ Adventures ကို၏နောက် update ကိုများအတွက်တွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာကြည့်ရှုပါ။ မာတင်ကပိုပြိုင်ဘက်များနှင့်ပရိတ်သတ်များကိုကူညီရှာဖွေပေးဖို့ကိုပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက် drop ဖို့မေ့လျော့တော်မမူပါနှင့်။ လမ်းကြောင်းများနှင့်စမ်းသပ်မှုမင်္ဂလာများနှင့်က bumpy စီးဖြစ်မယ့်အဖြစ်ကိုတက် buckle ဖို့သတိရပါ!
✦တိမ်တိုက်ကြော်ငြာကို Save လုပ်ရန်မှတ်စုများ✦
သငျသညျပင်မမျက်နှာပြင်အတွက်မိုဃ်းတိမ်ခလုတ်ကိုသုံးပြီးကိုယ်တိုင်တိုးတက်မှုကယ်တင်သေချာပါစေ။ ထိုအသင်အွန်လိုင်းဖြစ်ကြပြီးမှာ google account ကိုနဲ့ log in ပြုလုပ်ပြီးသေချာအောင်ပေးပါ။ နှင့်သင့်မှာ google account ကို auto-Sync ကို App ကိုဒေတာဖြစ်ပါတယ်သေချာပါစေ။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်သင့်ရဲ့ဒေတာကိုအပ်လုဒ်မတင်ပါလိမ့်မယ်ပျောက်စေနိုင်သည်။
ASUS က devices များနှင့်အနည်းငယ်အခြားထုတ်ကုန်များပေါ်မှာ multiplayer ကစားရန်ပြဿနာတစ်ခုရှိပါသည်။
* အစာရှောင်ခြင်းတုံ့ပြန်မှုသည်, အသုံးပြုသူကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းအတွက်အစီရင်ခံစာရက်ပေါင်းများစွာ replied ပါလိမ့်မည်, support@minimostudios.com ဖို့ကျွန်တော်တို့ကို bug ကိုအစီရင်ခံစာနှင့်မည်သည့်ပြဿနာပေးပို့နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့သေး fix ကြပြီမဟုတ်အချို့ bug တွေနှင့်အကြံပြုချက်များရှိပါတယ်, စိတ်ရှည်ကျေးဇူးပြုပြီးငါတို့ကို updated စောင့်ရှောက်လော့။ ထောက်ခံမှုများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
•နယူးယာဉ်များ: Steampunk & Silver, Bullet
သင့်ရဲ့ပြဿနာတစ်ခုတုံ့ပြန်မှုရဖို့ support@minimostudios.com မှာကျွန်တော်တို့ကိုအီးမေးလ်တစ်စောင်ပေးပို့ပါ။
69.08 ကို MB